BUDDHIST TERMS' Dictionary: INITIAL APPLICATION OF THE MIND - ၀ိတက္က
INITIAL APPLICATION OF THE MIND - ၀ိတက္က
INITIAL APPLICATION OF THE MIND Vitakka
၀ိတက္က - ၀ိတက်၊ ကြံစည်ခြင်း၊ စိတ်ကူးခြင်း၊ စိတ်ကို အာရုံပေါ်သို့ တင်ပို့ပေးခြင်း။
(၁) ကာမ၀ိတက် - ကာမဂုဏ်၌ ကြံခြင်း၊
(၂) ဗျာပါဒ၀ိတက် - သူတစ်ပါးတို့ကို ပျက်စီးစေကြောင်းကြံခြင်း၊
(၃) ၀ိဟိံသာဝိတက် - သူတစ်ပါးတို့ကို ညှင်းဆဲခြင်းနှင့် စပ်၍ကြံစည်ခြင်း - တို့ဖြစ်သည်။
(၁) နေက္ခမ္မ၀ိတက် - သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရန်ကြံခြင်း၊
(၂) အဗျာပါဒ၀ိတက် - သူတစ်ပါးချမ်းသာစေရန် ကြံခြင်း၊
(၃) အ၀ိဟိံသာဝိတက် - သူတစ်ပါးကို မညှင်းဆဲရန်ကြံခြင်း - တို့ဖြစ်သည်။
Initiation of thought; the function of directing the mind towards the object of thought
There are three kinds of demeritorious (akusala) vitakka and three kinds of meritorious (kusala) vitakka.
The three demeritorious vitakkas are : -
(1) sensual thoughts, kᾱma vitakka;
(2) thoughts of destroying others, byᾱpᾱda vitakka
(3) thoughts of tormenting others, vihimsᾱ vitakka.
The three meritorious vitakkas are :-
(1) thoughts of renunciation of the world, i.e, emancipation from the Round of Rebirths, Samsara, nekkhama vitakka;
(2) thoughts of goodwill towards others, abyᾱpᾱda vitakka; and
(3) thoughts of not hurting others, avihimsᾱ vitakka.